Sida loo sameeyo a FLV Photo Muqaal la Music
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo a FLV Photo Muqaal
Guide sahal in la sameeyo FLV Muqaal la Music
Slideshow FLV waa hab ku haboon in ay sawiro iyo videos online ay sabab u tahay baaxadda yar oo tayo leh oo macquul ah. Wondershare DVD Muqaal dhise kana soobixiya wax ka badan raaxadeeda waxa si dhakhso sameeyo slideshow la music , sawiro iyo kuu ogolaanayaa inaad la abuuro FLV videos, iyo sidoo kale kale qaabab video . Waxaad u abuuri kartaa slideshow FLV in talaabooyin fudud sida hoos.
1 Import Photos & Video iyo Music for FLV Muqaal
Ku rakib iyo abuurtaan gaare slideshow ah, u tag Abaabulaan tab iyo dajiyaan aad sawiro, videos iyo files music. Waxaa loo isticmaali doonaa guur u dhexaysa bogagga xiga. Laakiinse adigu waad ka bedeli kartaa adigoo raacaya talaabo 2.
2 Codso guurka iyo Motion Saamaynta
Tani gaare slideshow waxaa ka mid ah in ka badan 100 saamaynta kala guurka ah ee bogagga beddelaan. Ka hor intaadan dalban, double-click thumbnail dowladda KMG ah ay ku eegaan in ciyaaryahanka on xaq. Waxa kale oo aad randomize yaabaa kala guurka ama codsan mid kala-guurka si oo dhan bogagga in slideshow FLV.
3 Save Photo Muqaal in FLV Video
Dooro qaab Flash Video sida wax soo saarka iyo samaysaa saldhigyo sare by button Settings riixaya. Ugu dambeyntii, guji Guba una ooyi in muddo ah, oo aad ka heli aad FLV video in la wadaago ee YouTube, Facebook, MySpace, Mobile Phone. Haddii kale, ciyaaro FLV video on computer via ciyaaryahan FLV taagan oo keliya.
FLV Muqaal Talooyin:
Wixii faahfaahin dheeraad ah ee goobaha slideshow FLV, riix badhanka Settings iyo sheeg doorasho kala duwan, sida encoder, xallinta, heerka jir, heerka yara iyo goobaha cod ah.
Si aad u ciyaaro slideshow FLV on Nokia telefoonka gacanta, waa in aad si Nokia FLV taxane (* dhigay nooca encode . flv ). Marka abuuray, geliyaan flv in Nokia telefoon ama online iyo aragtida slideshow FLV isticmaalaya FLV ciyaaryahan ama plugin web browser.
Waxaad sidoo kale laga yaabaa inay geliyaan slideshow FLV in YouTube si ay ula wadaagaan dad badan. FLV videos waxaa lagu dhammaataan oo ay taageerayaan YouTube.
More: Beddelaan All qaabab Popular in FLV
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe taageeraa oo dhan qaabab video oo caan ah. Sidaa darteed, waxaad u dajiyaan karaa videos u baahan in la beddelo qaab, oo u badbaadin doonaa qaab kale. Ma ahan oo kaliya gaare slideshow DVD ah, laakiin kaliya Converter FLV awood badan. Wixii Caddaynay qaabab talooyin ay taageerayaan, baaritaan tixraacyada qaab video.
More: Beddelaan FLV in MP4, AVI, MOV, MPEG ama Guba FLV in DVD
Waxa kale oo aad soo dhoofsadaan yaabaa FLV in DVD Slideshow Builder Deluxe oo u badbaadin doonaa sida MP4, AVI, MOV iyo 3GP, ama xataa gubi FLV video inay DVD la bedeley DVD qurux badan. Wixii Caddaynay qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan, baaritaan tixraacyada qaab video. Halkan, waxaan ku talinayaa in la badbaadiyo FLV in MP4 ay taageero ballaaran oo qalab kala duwan, sida iPhone, iPod, Apple TV, Gphone, phone Nokia, phone LG, PSP, Palm, Zune, iwm
Flash Video (* . FLV) waa qaab file weelka loo isticmaalaa in lagu samatabbixin video internet-ka la isticmaalayo Adobe Flash Player versions 6-10 (ee ay soo Macromedia) a. Flash Video content sidoo kale laga yaabaa in lagu gundhig gudahood files Jabbuuti. FLV videos hubkaas ayaa loo isticmaalaa shirkadaha caalamiga ah, oo ay ku jiraan YouTube, Google Video, Yahoo! Video, metacafe , Reuters.com, iyo qaar badan oo kale oo bixiya news. Flash Video laga daawan karo nidaamyada hawlgalka ugu, via Flash ee Adobe Player iyo web browser plugin, ama Players FLV dhinac saddexaad tarin.